Maalinta: Oktoobar 4, 2017
Maalinta Ugu Dambeysa ee Isticmaalka Kart27: 20 Oktoobar
Geedi socodka nidaamka kala guurka GaziantepKart wuu sii socdaa. Mashruuca Isbeddelka GaziantepKart waxaa loo bilaabay hal-abuurnimo badan in loo keeno adeegyada gaadiidka, 700 kun oo adeegsadeyaal ayaa dhammaystiray u guuritaankoodii GaziantepKart ilaa hadda. 100 waa kun adeegsade jir ah [More ...]
Kantaroolka dadku maro ee iskudhufka TCDD ee Gebze
Kocaeli Magaalo Weyn ee Magaalada Gebze Peace District ee ku taal khadka TCDD ee loogu talagalay muwaadiniinta si ay u bixiyaan gaadiid ka sii habboon oo aamin ah oo gaadiidka TCDD ee dusha ka gudbaya qandaraaska dhismaha ayaa la fuliyay. 7 shirkadood ayaa gudbiyay hindisadooda. [More ...]
U soo gudbinta nolol rakhiis ah oo caafimaad qabta muwaadiniinta Degmooyinka Mersin ee Magaalo Weynta Smart Bicycle, xilligan xagaaga waxaa ka helay fiiro gaar ah muwaadiniinta Mersin. Tamarte ku habboon, deegaanka u habboon oo caafimaad qaba [More ...]
Mashruuca Buca Mashruuca ayaa dhameytiray Goobta waxaa lagu tuuri doonaa 2018
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, Karabağlar'da "Mukhtar Convergence" munaasabadii labaad wuxuu la kulmay 47 muhaajiriin Buca. Duqa Kocaoğlu wuxuu dhagaystay dhibaatooyinka muhaajiriinta midba midka kale, wuxuuna sheegay in mashruuca Buca Metro [More ...]
Waxay rabaan inay ku dhameeyaan suuqa kalluunka!
Ganacsatada Suuqa Kalluunka ee ku yaal bartamaha Izmit ayaa dhibaato weyn ku sugan dhawaan. Dhibaatada baabuurta la dhigto ee dhaqdhaqaaqa ganacsatada suuqyadu ma dhaqaaqaan mas'uuliyiinta, iyagoo sugaya ganacsiyada inay xiraan xirmooyinka! Xarunta Bulshada ee Izmit [More ...]
Taxi T Plate waxay soo gashay Bilecik
Kulankii caadiga ahaa ee Golaha Dawlada Hoose ee Bilecik bishii Oktoobar, maayarka iyo golaha degmadu waxaa loo oggolaaday inay fuliyaan shaqooyinka iyo macaamillada iyaga oo matalaya taksiyada taksiyada si ay ugu gudbiyaan dalabka taarikada 'T'. Go'aanka midaysan [More ...]
Diyaarinta 4 OIZ ee Kayseri
Waxaa jira xawaalad degdeg ah oo maalgashiga Kayseri. ONIMX OIZ waxaa lagu diyaarinayaa magaalada. Meelaha maalgashiga ee OIZ cusub, oo lagu dhisi doono aag ku dhowaad 4 Mitir laba jibbaaran, waxaa lagu go'aamiyey Degmadda Kayseri. [More ...]
Waxaa London ka dhacday dhacdo xiiso badan. Nin jooga saldhigga tareenka ee Wimbledon wuxuu bilaabay inuu akhriyo Kitaabka Quduuska ah intuu tareenka gudahiisa ku jiray. Ninkii kor u akhrinaya cutubyada Kitaabka Quduuska ah ayaa argagaxay. a [More ...]
Eskisehir OSB iyo tukaanka Hasanbey ayaa isku xirnaan doona
Raiisel wasaare Binali Yildirim, Eskisehir OSB iyo tuulada logistikada Hasanbey ayaa isku xirnaan doona mid walbana waa uu siinayaa warka wanaagsan. Raiisel wasaare Binali Yildirim, oo u yimid Eskisehir, maamulka Eskisehir OIZ xafladda furitaanka Xarunta Ganacsiga ee Alp Aviation Helicopter Xarunta [More ...]
RayHaber 04.10.2017 Warbixinta Shirka
Coal in la iibsado
Ka gaabinta duulimaadyada YHT sababtoo ah cillad khadadka kataner ah
Shalay (on 03.10.2017) Sababo la xiriira guuldarrooyinka khadadka kateetarka ee bixiya tamar koronto kuwa HTTs, HTTs waxay ku shaqeeyeen sun ah inta u dhaxaysa saacadaha 18.40 - 22.45. Ma jiraan cilado farsamo oo ka jira HHTs iyo tamar [More ...]
Trustpark Dolmuş Isticmaalaya, in la qaato dhulka hoostiisa
Maadaama Duqa Magaalada Ankara ee Magaalooyinka Melih Gökçek uu had iyo jeer taageersanaa ganacsatada, wuxuu yiri, az Maxaan ku sameyn karnaa ganacsatada? Dhammaantiin waxaad Ankara ka qaadaysaa dhinac ilaa dhinac kale. waxaana rajeynayaa [More ...]
Kardemir wuxuu helaa shahaadada TSI
Natiijo ahaan daraasadihii lagu sameeyay EB CERT (EISENBAHN-CERT), oo ah Hay'adda Rasmiga ah ee Shahaadada Rasmiga ah, soo-saarkii R350HT tayo sare leh cimri dheeri ah "Hard Rail" wax soo saare ayaa laga bilaabay Kardemir, 6 (49E1, 49E5, 54E1, 54E4 [More ...]